Jarmanii: Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii |
Jarmanii: Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii
April 17, 2017 in Oromia
Nuti kan biyya Jarmanii jiraannu miseensoonii fi deggertotiin ABO Ebla 15 bara 2017, guyyaa gootota Oromoo, sirna oowwaan kabajanneerra. Sirnni kabajaa kun Guyyaa sa`aa 12:00 iraa jalabee hanga 18:00 fufee oole. Sirni kabajaa kun akkumma aadaa qabsoo bilisummaa Oromootti eebba manguddoo fi yaadanoo goototaatiif dhungooleen hirmaattotaan qabsiifamun erga banameen booda faaruu alabaa Oromoo fi ergaa faaruu gototaa dhageessifamaniru.
Ittti aansuudhaan bakka bu`aa koree hojii qindeesitu ABO kutaa giddu-galeessa Awuropaa irraa seenaa guyyaa gototaa ilaalchisuun gadi-fagenyaan ibsi kenname. Guyyaan kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka daran guddaa qabuu fi kan yoomiyyuu hin dagatamnne tahuusaa ballinaan hirmaattotaaf ibsame. Itti dabaluun bara uummati Oromoo sirna gabirummaa jalatti kufee jalqabee hanga bara ammaatti dhiignni lammii Oromoo bakka adda addaatti mootummaa Habashaa fi ergamtoota mootumichaatiin osoo wal irraa hin citiin dhangalayaa jiru hatattamaan dhaabbachuisuun akka hedduu barbaachisu ibsame. Kana fiixaan baasuuf karaa tokkichaa fi furmaanni jiru jaarmaa ABO jalatti hiriiruudhaan waan barbaachisu hundaan deggeerun, Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) cimsuu duwwaatuu furmaata filannoo biraa hin qabne ta`uu ibsame.
Hirmaattooti walaloo adda addaa dhiyeesuun erga hirmaatan booda xummura irratti marii ballaan hirmaattota wajjiin godhamee, deggersa WBOf qarshiin gumaachamee, fi ibsa ejjanoo armmaan gadii kanaan yaadannoon guyyaa gototaa bara 2017 milkkiin xumurameera.
Heeraa fi seera ABO kabajuun deegersa qabsoo bilisummaa Oromoo ni jabeesina
Gaachana ummata oromoo kan tahe WBO dinagideen deggeerun ni fuufa.
Ololaa fi kijibaaf gurra hin laannu
Hanga bilisummaan uummata Oromo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaawutti ciminaan ni qabsoofina
Tokkummaa fi Tumsa jaarmiyoolee qabsoo bilisummaa Oromoo kan heeraa fi seera jaarmaa ABO hin faalleesine ni deggerra.
Qabsaawoonni ni kufu qabsoon itti fuufa!
Ebla 15 bara 2017
DIINQA OROMOO KUTAA 1FFAA fi 2FFAA, Ebila, 2017